Fantatr'i Jesosy tsara ianao | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Nilaza i Paul fa tsy sombiny afa-tsy sary izy ary tsy afaka mahita ilay sary manontolo: «Hitantsika ao anaty fitaratra ao anaty sary ankehitriny isika; fa mifanatrika mifanatrika. Ankehitriny dia fantatro tsirairay ny sombintsombiny; fa rehefa afaka izany dia hahafantatra toy ny ahafantarana ahy aho (1 Kor. 13,12). Ireny teny kely ireny dia miteny be dia be. Voalohany, hahay hahalala azy isika indray andro any satria efa hainy isika. Tsy azonay ny momba an'Andriamanitra, ary zavatra tsara izany. Azontsika atao ve ny mahafantatra izay rehetra momba azy amin'ny maha-olombelona antsika - miaraka amin'ny fanetren-tena? Amin'izao fotoana izao dia tsy takatry ny saina amintsika Andriamanitra. Ary faharoa: mahalala antsika ny fotony izy, eny fa na dia ao amin'ny toerana miafina izay tsy misy olona mijery. Fantany izay hitranga amintsika - ary nahoana ny zavatra iray no manetsika antsika amin'ny fomba tokana. Niresaka momba ny fahafantaran'Andriamanitra azy tsara i Davida: «Mipetraka aho na mitsangana, fantatrao izany; Ianao no mahalala ny eritreritro Mandeha na mandainga aho, ka dia manodidina ahy ianao ary mahita ny lalako rehetra. Fa, indro, tsy misy teny amin'ny lelako, ry Iaveh, izay tsy mahalala. Manodidina ahy amin'ny lafiny rehetra ianao ary mitazona ahy ny tananao. Mahatalanjona tokoa ny fahatsapana azy ary avo loatra ho ahy, tsy azoko izany » (Salamo 139,2: 6). Azoko antoka fa afaka mampihatra ireo andininy ireo amin'ny tenantsika isika. Natahotra ve ianao? - Tsy tokony ho izany! Tsy toa antsika Andriamanitra. Indraindray dia mihodina amin'ny olona bebe kokoa isika rehefa mahafantatra bebe kokoa azy ireo, saingy tsy manao izany mihitsy izy. Tian'izay te ho fantatra rehetra, te ho maheno ary hoheverina. Mieritreritra aho fa izany no antony mahatonga ny olona maro manoratra zavatra ao amin'ny Facebook na vavahadin-tserasera hafa. Samy manana ny zavatra holazaina ny tsirairay na misy mihaino na tsia. Izay rehetra manoratra zavatra ao amin'ny Facebook dia manamora izany; satria afaka manolotra ny tenany araka izay tiany izy. Tsy hanolo fialamboly mifanatri-tava foana anefa izany. Misy olona afaka manana pejy eo amin'ny Internet izay miditra matetika, saingy mbola afaka manirery sy malahelo izany.